July 29, 2014 – democracy for burma
#MYANMAR #BURMA#NayMyoZinေ#ရးသားသူ တိုင်းကျော် #PR
On July 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၅၃ ခုက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အဖွဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံစဉ် အဓိက ငြင်းခုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အချက်ကတော့ Proportional Representation လို့ ခေါ်တဲ့ PR စနစ် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပီအာရ် စနစ်ဆိုတာဟာ ပြည်သူတွေဟာ အမတ်လောင်းကို တိုက်ရိုက် မဲပေးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီ တခုခုကို မဲပေးပြီး အဲဒီ ရလာတဲ့ မဲအရေအတွက်အပေါ် မူတည်ကာ ပါတီတွေကနေ အမတ်အရေအတွက် အချိုးအစားလိုက် လွှတ်တော်မှာ ပါဝင်ခွင့်ရတာမျိုးလို့ အကျဉ်းပြောရင် ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ပီအာရ်စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်အားအကြီးဆုံး အတိုက်အခံ ပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သဘောမတူသလို တိုင်းရင်းသားပါတီ အတော်များများက လည်း သဘောမတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကတော့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပီအာရ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်၊ မသင့် လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်၊ အဆုံးအဖြတ် ရယူမယ်လို့ ပြောနေပါပြီ။ ပီအာရ်စနစ်ကို ဘယ်သူတွေက ထောက်ခံနေကြပါသလဲ၊ ဘာကြောင့် ပီအာရ် စနစ် ကျင့်သုံးစေ ချင် ကြတာလဲ၊ ပီအာရ်စနစ် ကျင့်သုံးပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဆိုတာ ခုတပတ် ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပီအာရ် စနစ်အကြောင်း အကျယ်တ၀င့် မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ပီအာရ် စနစ် ကျင်းပဖို့ အသံတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပဲ စပြီး ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်တဲ့အခါ ၀င်ပြိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ၄၀ ကျော်မှာ ရှမ်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် ၃ မှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အမတ်လောင်းကို ပွတ်ကာသီကာ ရှူံးသွားတာကလွဲရင် ကျန်ဝင်ပြိုင်တဲ့ နေရာအားလုံး အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ရလဒ်ကို ကြည့်ပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကျရင် တို့ပါတီတွေ အပြတ်အသတ် ရှုံးပြီး လွှတ်တော်ထဲ တယောက်မှ မရောက်ရင် ဘယ့်နှယ်လုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ပါတီခေါင်းဆောင် တချို့ရဲ့ ခေါင်းထဲ ရောက်သွားရာကနေ ပီအာရ်စနစ် ကျင့်သုံးဖို့ လှုံ့ဆော်တာမျိုး ဖြစ်လာတာပါ။
ဒီကိစ္စ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောဆိုနေကြသူတွေကတော့ တစည ပါတီ၊ အန်ဒီအက်ဖ်ပါတီနဲ့ ဒီမိုကရက်ပါတီ (မြန်မာ) ဖြစ်ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကတော့ ဘာတခုမှ ထုတ်မပြောပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဒီကိစ္စ လွှတ်တော်ထဲ တင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ သဘောထားကို တိတိကျကျ သိကြရတော့မှာပါ။ တကယ်တော့ ဒီ စနစ်အကြောင်း ပြောလာသူတွေ အားလုံးဟာ တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွား ဆိုတာထက် သူတို့ ပါတီအကျိုးစီးပွား ကွက်ကွက်လေးကို ကြည့်ပြီး ပြောနေတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ စနစ်အတိုင်း သွား၊ ရွေးကောက်ပွဲကလည်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမယ် ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ ၂၀၁၅ မှာ အနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ အနိုင်ရပြီး တိုင်းပြည် ကောင်းလာမှာထက် သူတို့ပါတီ အမတ်တွေ ရွေးချယ်မခံရ မှာကို စိုးရိမ်ပြီး ခုလို ပီအာရ် စနစ်ကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောဆိုလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အခုလက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ အခု လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအောက်မှာကိုပဲ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီး တကြိမ်မှ မကျင်းပဖူးသေးပါဘူး။ ပြောရရင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေ သူတို့ လိုတဲ့ ရလဒ် ထွက်လာအောင် လိုသလို လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက် ခဲ့တဲ့ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲလို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ၂၀၁၀ မှာ သူတို့စိတ်ကြိုက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဆိုတာကို ဖွဲ့ပြီး ရွေး ကောက် ပွဲနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ကြီးကြပ်ခိုင်းပါတယ်။ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကို တဖက်သတ် အမိန့်အာဏာသုံးပြီး ပြဋ္ဌာန်း ကျင့်သုံးပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်နိုင်အောင် လုပ်ပါတယ်။ ကချင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကို လုံးဝ ပါတီထောင်ခွင့်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့် မပေးပါဘူး။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေအနက် ထိန်ချန်ချင်တာ ထိန်ချန်ထားပါတယ်။ အမတ်တွေ စာရင်းတင်မဲ့ရက် ကန့်သတ်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အမတ် နည်းနည်းပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်နိုင်အောင် လုပ်ပါတယ်။ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်းကို စိတ်ထင်သလို ပြုစုပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့် မရှိအောင် မဲရုံတွေကို တည်ဆောက်ပါတယ်။ ကြိုတင်မဲဆိုပြီး မဲလိမ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး မဲရေတွက်ရာမှာ ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ ဘယ်သက်သေတွေရှေ့မှာမှ မရေတွက်ဘဲ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ် ရေတွက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရလဒ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်အထိ မမှန်မကန် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲလို လုပ်တာဟာ ပြည်သူတွေက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အမတ်ကိုရွေး၊ မဲအများစုရသူ အမတ်ဖြစ်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စနစ်အောက်မှာ လုပ်ခဲ့တာပါ။ တကယ်လို့သာ ဒီထက် ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပီအာရ်စနစ်နဲ့သာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို ပြည်သူလူထု နားမလည်ရုံသာမက လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့ အောက်ခြေအထိ အဆင့်ဆင့်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ စစ်အရာဟောင်းရှိတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဟာ မသမာမှုတွေ ပိုပြီး လုပ်လာနိုင် ပါတယ်။
ဒီအတွက် လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပီအာရ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့ မသင့်သေးသလို ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ တွေကိုလည်း အများကြီး ပြင်ဆင်ဖို့ လိုနေ သေး ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
#Myanmar #Burma #Military #MP says ” #PR” #system should #not #be #practiced yet
On July 29, 2014 July 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
The country should not practice the proportional representation system yet as it’s still insecure, said military MP Colonel Htay Naing on July 28.
“In my point of view, it’s too early to practice the system. For our country has stability only now, but no security. Many problems may come out of it. Currently there are many contrary views on the issue. If so, the system should not be practiced yet,” he told local reporters.
Colonel Htay Naing also said the system should be carefully reviewed whether it’s in accordance with the Constitution or not, adding that the election law should be drafted only after Section 436 of the Constitution be amended.
Concerning the system, he discussed at the parliament that many armed groups arose against the government inafew years after the country’s independence, and that the peace process is still under way negotiating with them, and that the people’s lives across the country are still insecure although the country is stable toadegree, and some regions still encounters communal and religious conflicts, stressing the importance of reviewing the system whether it’s possible or not at this moment when there are different views on it.
Eighteen MPs discussed the system at the parliament, as proposed on July 28 by MP Aung Zin from the National Democratic Force Party.
Three military MPs discussed the issue as third party and eight MPs from the National League for Democracy discussed against it. And seven MPs from the ruling party discussed supporting the system.
#MYANAMAR #BURMA #STUDENT WINS #TOP #PRIZE FOR #BEAUTY #HANDWRITING IN #THAI #language
On July 29, 2014 July 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma, ThailandLeaveacomment
MYANAMAR BURMA STUDENT WINS MEDAL FOR BEAUTY HANDWRITING IN THai language 🙂 A 12-year old Burmese boy causedabig stir in Tak province when he won the first prize of the Thai Handwriting Competition held by the Office of the Basic Education Commission on the occasion of the Thai National Language Day on Tuesday.
Yaza is studying in Prathom3at Arunmetha school in Pob Phra district of Tak where about 30 percent of the students are poor and live near the Thai-Burmese border. Although born and grew up in Thailand, Yaza is considered asaBurmese immigrant.
His Thai teacher, Mrs Sang-aroon Sornchai, described Yaza as very deligent and dedicated to study and has represented the school at several handwriting competitions.
The boy said he was very happy to be awarded the top prize and to bring fame to his school and family. ด.ช.ยาซ่า จาก ร.ร.อรุณเมธา เด็กนักเรียนชาวพม่า ได้รับรางวัลชนะเลิศคัดลายมือ ป.3 เนื่องในวันภาษาไทย 29 กค.57
น้องอยู่ ป.3 โรงเรียนอรุณเมธา(จ.ตาก) ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สพป.) ตาก เขต2ชนะเลิศคัดลายมือวันภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ของ สพฐ.
#Burma #Myanmar #2015 #General #Election and #whither the #commission #go?
On July 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Balanced, neutral and honorable commission, laws, by-laws, rules and regulations are the key forafree and fair election. Fairness of elections will be nothing if rules and regulations are too strict to follow though the commission is balanced and neutral and if the commission is unfair though laws and regulations are fair.
The Union Election Commission prepares its step to control electioneering of political parties, party leaders and their relying on the media for their electioneering. To look back to the beginning of the commission, we need to go back to the year 2010.
As it’s established by the State Peace and Development Council with aims to make 2010 general elections successful, it should be called Aye-Chan-Pyo Commission. It was established on March 11, 2010 in accord with Section 443 of 2008 Constitution and Section3of 2010 Union Election Commission Law enacted by the council.
The Union Election Commission is chaired by Thein Soe and hasamembership of 17 including Myint Naing, Dr Tin Aung Aye and Aung Myint. The State Peace and Development Council allowed Deputy Chief Justice Thein Soe, Deputy Attorney General Myint Naing, Judge of the Supreme Court Dr Tin Aung Aye and Aung Myint,amember of Civil Services Board to retire on March 10, 2010.
The commission’s office was formed withatotal of 200 staff members in accord with the decision made by the government’s meeting numbered 47/2010 held on December 9, 2010.
New government and new commission
The government of the ruling party “Union Solidarity and Development Party” which wonalandslide victory in the 2010 election established the new commission. While it seemedanew commission, it’s formed with almost every member from the old one. So it can be said they just madeasnake-skin change.
It made no significant difference as the ruling party’s chairman and the President appointedatop-ranking leader of the party as the commission’s chairman after they formed the new government. Tin Aye became the commission’s chairman on March 30, 2011. The commission under Thein Sein’s administration is no difference from the one of the SPDC. Every member of the new commission are from the old one. Continue reading “#Burma #Myanmar #2015 #General #Election and #whither the #commission #go?” →
#เจนี่ #อัพเดท #เทียนโพธิ์สุวรรณ์” #โชว์ #ใบหย่าแล้ว!!
On July 29, 2014 July 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
21.50 น. เจนี่ หลังจากเป็นโสด ได้นั่งเครื่องบินไป แอลเอ.แล้วเมื่อสักครู่นี้ ได้ถ่ายภาพกับหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน!!
เจนี่ ..โชว์ใบหย่าแล้ว …
เจนี่ จะบินไปลอสแองเจลลิส 31 ก.ค.นี้ เที่ยวบินที่ TG692 (บ่ายโมง)
เจนี่ยิ้มแย้ม กับทนายความ หลังเป็นโสดแล้ว และกลับไปใช้นามสกุลเดิม เจนี่ขอรถ boxster คืนอย่างเดียว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้คืน เพราะอดีตสามีเอาไปอัพให้ แต่รับปากต่อหน้าทุกคนว่าจะคืนให้…เจนนี่เปลี่ยนไฟลท์ก่อนจะเลื่อนไฟลท์บินไปลอสแองเจลลิสคืนนี้ จากกำหนดเดิมจะบินไปลอสแองเจลลิส 31 ก.ค.นี้ (เที่ยวบินที่ TG692)
#Thailand #Norwegian #around the #world #biker,s #wallet #return #songhkla
A Norwegian around the world biker lost his wallet at south thailand.Finders gave it tourist police, they search for the owner and could give it back.
#โลกชาว #นอร์เวย์ #น้ำใจ #คนไทย”#สงขลา
#National #Thai #Language #Day #Gen #Prayuth
BANGKOK, July 29 — On the occasion of the National Thai Language Day today, Gen Prayuth Chan-ocha, chief of the Army and the National Council for Peace and Order (NCPO), said in his speech marking the day that all Thai people should value and protect the Thai language which showed the identity and development of the nation.
Gen Prayuth looked to the historical precedent for the occasion, explaining that National Thai Language Day falls annually on July 29 because oif His Majesty the King. The celebration is marked because His Majesty the King attended an academic discussion on problems regarding the usage of Thai vocabulary at the Thai language club of the Faculty of Arts in Chulalongkorn University on July 29, 1962.
In that meeting 52 years ago His Majesty the King made many knowledgeable remarks on the necessity for Thai people to use Thai correctly and conserve it.
“On the occasion of the National Thai Language Day, I would like to remind people and the youth of the nation to always realize that Thailand is one ofasmall number of countries that have their own languages, completely both spoken and written ones, and its language has beenavaluable heritage for longer than 700 years,” Gen Pyayuth said..
“Therefore, everyone should be proud of it and aware of the great contribution of ancestors for developing the characters and the Thai language that has existed until today. I encourage everyone to join forces to keep the Thai language asacultural asset of Thailand,” Gen Prayuth said. (MCOT )